သိပ်ချစ်ပြမိသွားတဲ့အခါ . . . . . – Shinyoon
သိပ်ချစ်ပြမိသွားတဲ့အခါ . . . . .
ချစ်လားလို့ မမေးပဲ သိပ်ချစ်တဲ့အကြောင်းတွေပြောခဲ့မိတယ် ။ တစ်ဆက်တည်း သူမရှိရင် မဖြစ်ပါဘူးဆိုတဲ့ အမှန်တရားတွေကို ဝန်ခံခဲ့မိတယ် ။ ကိုယ့်ရင်ထဲကို မြင်ပါစေဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ အရိုးသားဆုံး ထုတ်ပြဖြစ်ခဲ့တာပါ ။
အမှားတွေ ရှိလာတဲ့အခါ တောင်းပန်စရာမလိုပဲ ခွင့်လွှတ်ပေးခဲ့တယ် ။ နားလည်ပေးပါလားဆိုတဲ့အတွေးနဲ့ ပြင်လာမယ်လို့ထင်ခဲ့မိတာပါ ။ တကယ်တမ်းကျတော့ ငါ ဘယ်လောက်မှားမှား သူမှ ငါ့မရှိပဲမနေနိုင်တာဆိုတဲ့ အတွေးပဲ စွဲသွားခဲ့တယ် ။
သူ့ဘက်က စမခေါ်ပေမယ့်လဲ ကိုယ့်ဘက်က စခေါ်ဖြစ်ခဲ့တယ် ။ အရမ်းလွမ်းလို့ပါဆိုတဲ့ အကြောင်းအရာသက်သက်နဲ့ ။ နောက်ဆုံးကျတော့ ဘယ်အရပ်ပဲရောက်ရောက် ကိုယ်မှစမခေါ်ဘူး ဘာအသံမှ ထွက်မလာတော့ဘူး ။
နေရာတကာမှာ စိတ်ပူပေးခဲ့မိတယ် … မလိုခင်ကတည်းကနေ ကြိုပြီးရောက်နှင့်နေတာမျိုးပေါ့ ။ ဖြစ်စေချင်ခဲ့တာက သူငါ့ကိုသိပ်ချစ်ပါလားဆိုတဲ့ အတွေးမျိုး ရှိစေချင်တာပါ ။ တကယ်တမ်းကျတော့ … ကိုယ်က သူ့အတွက် အမြဲရှိနေပေးရမယ်ဆိုတဲ့ တာဝန်မျိုး သတ်မှတ်သွားခဲ့တယ် ။
ကျွန်မ အရမ်းချစ်ပြမိသွားတယ်ထင်တယ် … ကိုယ်က တိတ်ဆိတ်လိုက်ရင် သူလဲ ဘာမှမပြောပဲနေနိုင်တယ် ။ ကိုယ်ရပ်နေလိုက်ရင် သူ့အနားမှာရှိတဲ့သူနဲ့ ပျော်နိုင်တယ် ။ ကျွန်မ နာကျင်နေပါပြီလို့ ပြောရင် မင်းတို့မိန်းမတွေကဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်တပ်တယ် ။ သေချာတယ် ကျွန်မလွှတ်ချလိုက်တာနဲ့ ဒီတစ်သက်ဝေးသွားတော့မှာ ။
အချစ်ပဲ ဖြစ်ဖြစ် စေတနာပဲ ဖြစ်ဖြစ် အပေးများသွားရင် လူပေးမှားသွားရင် တန်ဖိုးတွေ မဲ့သွားတတ်တယ်